Ahoana no hitaona Meksikana tovovavy - olona ny mombamomba - Ny Lahatsary Amin'ny Chat - Ny Tsara Indrindra!
Ahoana no hitaona Meksikana tovovavy - olona ny mombamomba
Aoka isika hanomboka eny an-dalambe ny heloka bevava
Rehefa notazonina efa ho efatra ambin'ny folo volana tany Meksika, fantatro ny zavatra iray na roa momba ny mamitaka Meksikana ny vehivavyVoalohany indrindra, misy zavatra maro hafa ao amin'ny firenena izay mihoatra lavitra noho ny ankizivavy. Ny sakafo dia mahagaga Meksikana sy ny samy hafa tanteraka amin'ny ny sakafo eo amin'ny lafiny hafa ny Rio Grande. Ny fifankatiavana ny vahoaka no iray amin'ny lehibe indrindra ody. Mino aho fa ny Meksikana amin'ny par amin'ny Kolombiana sy ny Thailandey ho an'ny namana.
Jereo ity lahatsoratra ity mba hanomezana fahafaham-po ny sasany tsara tarehy Meksikana ankizivavy na dia afaka mandeha mahitsy ny toerana tena toerana mba hitsena Meksikana ny tovovavy eto.
* Namako, El Conquistador, nanoratra ity lahatsoratra momba ny vehivavy Meksikana. Ny mazava ho azy, ny espaniola fisintahana, dia natao ho an'ny lehilahy mitady tia Atsimon'ny sisintany. Mafy ny manoro hevitra. Tsy mandoa mifantoka amin'ny zava-misy ny fampahalalam-baovao momba ny mpanondrana zava-mahadomelina sy ny herisetra. Toy izany ny zava-nitranga dia andian-jiolahy heloka ary nifantoka manakaiky ny sisintany miaraka amin'i Etazonia, toy ny fahazoan-dalana, tsy mba handeha. Nandany ny fotoana tao an-tanànan'i Mexico tamin'ny tanàna roa: ny tanànan'i Mexico (DF, toy ny mponina ao an-toerana ny antso izany) sy ny Guadalajara. Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia manao manokana ny tolo-kevitra avy amin'ny tanàna anankiray amin'ireo tanàna ireo, fa izaho dia hifantoka indrindra amin'ny Meksikana ankizivavy. Aoka isika hanomboka amin'ny zavatra tafahoatra amin'ny samy faran ny spectrum. Ao amin'ny atsimon'ny firenena, toy ny any Oaxaca, ny olona mazàna ho maizina sy ny maro hafa teratany. Ao amin'ny Firenena Avaratra toy ny Sonora sy Chihuahua, ny olona dia ho fotsy. Ho hitanao matroka fihodirana ny zazavavy avy any Avaratra.
Fotsiny aho nandao anao ka afaka manapa-kevitra araka ny tiany manokana.
Teratany ankizivavy toa anao no hita ao Però, Ekoatera ary i Bolivia. Fohy kokoa ny fihodirana, ny maizina, mahitsy volo mainty sy kianja vatana. Tsy voatery ho azy ireo tarehy.
Maro ny fotsy lahy izay tia izany hoditra feo sy ny vahiny maso toetra.
Any amin'ny faran'ny hafa ny mizana, dia ho hitanao ny Meksikana ankizivavy izay toa avy eny an-dalambe ny Madrid na Barcelona.
Nefa tsy izany no mafy sy haingana fitsipika
Lava, tanned, na ny fotsy hoditra sy espaniola amin'ny fikarohana. Ary avy eo dia misy ny ankizivavy tao afovoan'ny roa ireo zavatra tafahoatra, io no vondrona izay mandeha, ary indrindra ny Meksikana ny ankizivavy ao amin'ny vondrona farany. Rehetra ny ry zalahy izay manana vao tonga ao Meksika tokony hanomboka ao an-tanànan'i Meksika sy Guadalajara. Ao amin'ireo tanàna roa, misy fahafahana bebe kokoa ho an'ny lalao an-tserasera sy ny isan-karazany kokoa ny ankizivavy. Ny morontsiraka loatra ny voasary, sy ny Avaratry ny firenena (afa-tsy ho an'ny Monterrey) dia loatra Bambino-nappy noho ny tsirony. Ao an-tanànan'i Mexico, dia nipetraka tany Talana. Misy be dia be ny lalao andro fahafahana ao amin'io faritra io, ary tsara tarehy mora. Miezaka ny hahita toerana eo akaikin'ny metro intsony izany fa ny ankizivavy dia afaka mora foana ny mahazo ny fivoriana. Metro ao an-tanànan'i Mexico, raha oharina amin'ny London, ohatra, izany dia tena mora mifindra mihitsy aza rehefa teny espaniola anivon'ny aotra. Conesa - iray hafa maha-te ho tia faritra misy anao, dia tsara mendrika ny fitsidihana.
Fanamarihana farany: Mexico lehibe metropolis, ka ataovy ao an-tsaina rehefa mihaona zazavavy an-tserasera sy ny milaza fa ianao monina any ambanivohitra ny ankamaroany.
Foanana ny isa sy mandeha mialoha.
Ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny fotoana sasany dia tena ratsy izany tsy maintsy hiatrika maro loatra ny drafitra ny mahita izany.
Meksikana ny ankizivavy dia tsy eo anivon'ny mora, ohatra, tany Peroa, fa izy ireo dia manana mihoatra milalao noho izy ireo raha ny ao Espaina, na Arzantina.
Aza manantena ny manana harem-be ny ankizivavy iray isan-kerinandro (toy ny olona tany amin'ny Repoblika Dominikana). Fa aza dia manantena loatra, kely. Tsy manaiky ny manoroka ny takolany araka ny daty fahatelo amin'ny Vehivavy Meksikana.
Raha mahazo manakaiky ny sasany atin'akanjo mandritra ny andro sy nametraka ny fotoana amin'ny Fiarahana amin'ny fampiharana, ianao dia afaka mametraka ny sasany mendrika isa.
Mexico city dia ny tonga lafatra toerana mba handany ny andro, noho ny ho an'ny mpilalao. Maro ny olona manodidina anao fa ianao dia manana tanjona maro ary tsy misy olona hihaino azy ny zavatra ataonao. Lalao ny andro any ireo faritra Meksika: rehefa mampitaha ny roa amin'ireo tanàn-dehibe, foana aho nahita ny ankizivavy avy Guadalajara ho friendliest, sy ny tovovavy avy ao an-tanànan'i Mexico ho friendliest.
Na izany aza, izany dia tsy misy olana ao an-drenivohitra, satria misy be dia be ny olona namela nandritra ny andro, ary ho hitanao ny iray hafa tao anatin'ny iray minitra.
Izaho efa nangataka be dia be ry zalahy izay mieritreritra momba ny fandehanana any Amerika latina. Foana aho hamaly amin'ny fitness fampitahana.
Tsy ho amin'ny endrika lehibe rehefa izany dia tonga mba hisarihana ny vehivavy.
Eny, izany no tena ilaina. Mbola afaka manao vavy matavy Janga. Na izany aza, amin'ny alalan'ny fanatsarana ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainan'izy ireo (ho tsara endrika ara-batana, hanatsarana ny lafiny ara-bola ary manatsara ny fahaizany teny vahiny hanatsarana ny kalitao ny ankizivavy. Izay mipetraka any Amerika latina ary tsy afaka miteny espaniola (izay tsy te-hianatra) amin'ny vidiny mirary. Raha tsy maintsy mampianatra amin'izao fotoana izao Espaniola avy rangotra, ratra kely aho dia efa Margarita Madrigal ny"Ody manan-danja"ho an'ny espaniola. Raha toa ka efa manana ny fototra, ary ny faniriany mba manadala ankizilahy sy manadala ankizilahy miaraka amin'ny ankizivavy ao amin'ny teny espaniola lalao, avy eo dia hitondra teny espaniola mba ny zavatra ilaina hitsena. Ny fepetra ao Guadalajara ary Mexico city dia ho toy ny tsara ny fepetra ho anao. Dia nandady ny ankihibe sy ny handao ny ankihibe. Tranonkala iray hafa ampiasaina dia ny Meksikana Cupid na Amerikana latina sy Cupid. Raha manana teti-bola sy ireo miezaka ny manapa-kevitra eo izy ireo, dia manao izao: Dia afaka miezaka ny tananao amin'ny Badoo sy ny Meksikana Mampiaraka an-tserasera, saingy ny tapany voalohany dia foana amin'ny spam, ary ny tapany faharoa mitady manana matavy be dia be ao amin'ny Internet. Meksikana jono Cupid, ary izy ireo dia atỳ fitaovana ary ihany no mila. Meksikana Zanany mivoaka amin'ny mifangaro ny vondrona ao Meksika, ka nahasarika ny namana eo an-toerana (izay mety ho nampidirina) dia tena misy fiantraikany ny vokatra. Raha toa ka tsy manana iray ara-tsosialy club, izany hoe, misy fahafahana maro mba hilalao mandritra ny andro sy ny aterineto, noho izany dia tsy famoizam-po be loatra amin'ny alina. Any Mexico city, Polanco dia ambony maro clubs, ka tokony hijery tsara ny Filoha Masaryk Avenue. Meksikana ny tovovavy toy ny amerika latina hafa ny lahy ny vavy. Ny tiako holazaina, dia mila olona matanjaka, sexy, tia ady, izay afaka mikarakara ny tenany, ary izay afaka mandihy. Ho zava-dehibe, raha toa ka mahazo salsa tena tsara tao amin'ny bar, dia saika ny rehetra ny tovovavy dia anareo. Rehefa tonga eto aho, tsy mahazo salsa ny fiainako rehetra, ary nahazo izany izy ireo, satria nihevitra aho no mahafatifaty. Na izany aza, taorian'ny diany ity, nanapa-kevitra ny haka salsa lesona, satria fantatro fa tsy maintsy hiverina. Ny firaisana ara-nofo ao Meksika dia tsotra. Meksikana vehivavy misy kihony izany ary izy ireo hahafantatra ny fomba mitaingina eny ary, noho izany izy ireo dia afaka mora foana mipetraka sy hankafy ny fomba fijery. Noho izany, nandritra ny fotoana lany ao Meksika, dia efa tena mahafehy tsara ny saosy. Afaka dihy sy hitandrina ny gadona, na dia tsy tena misy aza izy. ny tsara indrindra. Na izany aza, ny fahasamihafana dia ny andro sy ny alina. Meksikana Zanany tia ny bandy fotsy avy Meksikana Zanany mba handihy sy hitandrina ny. Tsy kintana, toy hoy aho, saingy ny firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy Meksikana no tena be mora kokoa). Angataho izy mba handihy (lehibe raha toa ka fantany ny fomba dihy, raha tsy vao tsiky sy miezaka mijery tsara tarehy tsy misy henatra) Araka ny efa nolazaiko, Meksikana ny ankizivavy dia tsy ny fomba tsotra indrindra mba handihy amerika, fa raha manaraka ity raiki-pohy, izany dia tena mora ny manana firaisana ara-nofo ao Meksika. Ity lahatsoratra ity dia hanome anao ny zava-drehetra ianao no mila manomboka mamitaka Meksikana ny vehivavy. Aza adino ny tapa-kazo roa-tanàn-dehibe, ary fahazoan-dalana izay mahazo ny mpandeha an-tongotra ny fifamoivoizana nandritra ny lalao andro, ary aza maika ny mafana Taco saosy. Tsara, tsy mitady ny fomba mihaza Meksikana Zanany, na manana firaisana ara-nofo, fa izaho kosa dia mijery fotsiny fa ammina Meksikana Zanany, ny safidy ny toetra toe-tsaina toy ny antipathies, etc, satria aho manana Chihuahua zazavavy any Meksika, izy no te, Izaho te-handeha any Meksika. ny lahatsoratra dia manampy be dia be, misaotra lol nisafidy ny lalana hafa noho ny anao (MazatlA?n, Guadalajara, Leon, Guanajuato).
Ny fanjakana any Meksika teo aloha, fa taona maro lasa izay), sy ny manaiky aho ary tsy miombon-kevitra.
Manaiky aho fa Meksikana ny ankizivavy ny fomba tsotra indrindra ny handeha noho ny Arzantina (izay amiko dia ny tany efitra). Izy tsy hiverina, ary Buenos Aires is lavitra safe noho izay an-tanànan'i meksika). Soso-kevitra ho an'ny lalao vonona. Tsy miombon-kevitra amin'ny filazana fa ny ankizivavy dia tahaka ny ankizilahy. Nihevitra aho fa ny fomba hafa manodidina. Izy dia tena tsara fanahy sy hifanaja. Azo antoka sy mampihomehy, Eny, fa tsy macho na mahery vaika. Ny olona sasany mihevitra aho pelaka. Ny tovovavy latsaka ao am-pofoany, mijery ny fomba maro ny olona ao Meksika no macho ary miezaka ny hitondra tena tamim-pahatoniana (aho ny mifanohitra tony, tsy mandihy, tsy afaka manao akanjo, raha toa ka jereo ny sary). Efa voaray ny tsy tony ny Etazonia ho an'ny sasany fahombiazana, ankehitriny izay aho, fa ny lehilahy, ny fampitahana ao Meksika. Fiara iny izaho Aho nanao ny tenako ho toy ny tsara aho rehefa afaka manao rehetra ny andalana ny fromazy (tsy mbola nihaona na iza na iza ka manokana, etc, etc, sns.), ary niara-niasa tsara. Nanana firaisana ara-nofo amin'ny ankizivavy telo ary nanao dia mihoatra ny roa. Ary izaho dia reraka, ary izaho ihany no efa dimy daty, izany rehetra zazavavy dimy, rehetra dimy no nanintona ahy. Ny sexiest zazavavy dia nentim-paharazana iray izay handeha hijanona kely raha mbola tao Guadalajara, saingy naka be dia be, ary izy nitondra ahy lasy ka nitondra ahy ho hitsangatsangana, ka tsy misy ratsy, tsy misy vorona. Na izany aza, tandremo ny Amerikana mandeha namany, Meksikana zazavavy, dia raiki-pitia aminao, ary amin-kery. Ny zazavavy nanana firaisana ara-nofo miaraka amin'ny daty voalohany (amin'ny ambony indrindra ny roa daty ho an'ny tovovavy izay nanana firaisana ara-nofo miaraka amiko mba handeha avy amin'ny daty) hoy izy fa raiki-pitia ahy, hoy izy, ny fahatelo olon-tiany, dia efa manambady, oika) sy manala ny azy, na dia nandainga momba ny fandraisana mpiasa avokoa ny voalohany fiara fitateram-bahoaka. Tsara, dia mampihemotra ny ora tsy milaza amiko hoe veloma ny toby, sy ny manontany rehetra fiara fitateram-bahoaka trano rantsan-kazo izy ireo raha nahita ahy. Izaho nandositra tamin'ny taona zazavavy noho ny tantaram-pitiavana faran'ny herinandro in Guanajuato, izany dia lehibe, ary ho an'ny dolara aho nitondrany azy toy ny Andriambavy, ary nividy trano fandraisam-bahiny mihaja. Tsara, dia manapa-kevitra ny hilaza ny ray aman-dreniny tamin'ny faran'ny herinandro satria, araka ny (tsy misy fampitandremana), izy dia mahatsapa zavatra lehibe sy ny zavatra ilaina ho fantatra. Izy ireo efa nanipy azy avy tao an-trano. Soa ihany fa, fa tsy, ary izay tsara rehetra, fa mbola ho tsara. Amin'ny maha-vehivavy, dia hanaiky ny toerana ity. Samy javatra sy tena mahaliana. Izany no mahatonga ahy hieritreritra ny lalao ho an'ny mpivady (na dia marina aza aho Afrikana-Amerikana XD) Lol. Fa mety ho tsara. Tsy te-hanao ny zazakely eo amin'izao tontolo izao ny fahafaham-po na inona na inona adala fa dia hamono anao raha toa ka tsy hijanona amin'ny azy ireo, na tezitra ny ray aman-dreny izay Xenofobi. Ny vehivavy anti-panahy handray andraikitra bebe kokoa. Tsy ry zareo Afrikana-Amerikana izay, satria izay ny oxymoron. Izany no tena tsara ho mainty. Tsy raiki-pitia amin'ny ara-piarahamonina ity, injeniera tsy misy dikany.
Ny Lahatsary Amin'ny Chat Krasnoyarsk. Ataovy azo Antoka fa Ny
Rendez-vous Avec Zhongshan. Site de Rencontre de Zhongshan gratuit, Sans
ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana tsy misy lahatsary amin'ny chat mba hahafantatra ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana tranonkala ny lahatsary Mampiaraka online ny lahatsary amin'ny chat taona mampiaraka Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana maimaim-poana ny Fiarahana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny bandy ny lahatsary amin'ny chat ny taona